ezine kuphela Ukuhwebelana Crypto ukulalela izimfuneko umlamuli South Korean - Blockchain Izindaba
ezine kuphela Ukuhwebelana Crypto ukulalela izimfuneko umlamuli South Korean
Ekupheleni kuka Januwari, yabe seyaziwa mayelana owawuvimbela neziphathimandla South Korean ka engaziwa ukuthengiselana cryptocurrencies, okuyinto sacala kusebenta ngo-January 30. Ngokuhambisana nezidingo Financial Services Commission of South Korea (FSC), amabhange eziyisithupha aye ahlongoza ukusungula i ingqalasizinda ukudala ama-akhawunti nge empela. Nokho, kwacaca ukuthi kamuva, amabhange azidingeki ukuze sihlinzeke izinhlelo ezintsha ukuze bezikhungo Cryptocurrency Ukuhwebelana.
“Ukudalwa akhawunti amasha yabelwe uhlobo lwemali noma cha kuyisinqumo yokuzithandela ibhange,” isikhulu yasebhange kwezezimboni watshela i-edition South Korean ka Yonhap. uyachaza: “Amabhange kufanele nezibopho zomthetho ukuvimbela zemali bangenile kuphela izinqubo zangaphakathi: isiqinisekiso amaklayenti kusukela exchange mfihlo, ukuzinza kohlelo, Ukuvikelwa kolwazi umsebenzisi nokulandela anti-zemali kwezinkambiso.”
Lamabhange eziyisithupha okukhulunywe ngaye ekuqaleni, ezintathu kuphela – Shinhan Bank, Nonghyup Bank and Industrial Bank of Korea – ahlinzeke akhawunti amakhasimende of Ukuhwebelana Crypto. Futhi kuphela ezine 25 South Korean exchange Ukuhwebelana washintsha akhawunti engaziwa ku-akhawunti nge empela. Ngakho, izidingo komusha zivumelana Bithumb, Upbit, Coinone futhi Korbit.
Ngokusho Asia Economic, Shinhan Bank, esebenza Bithumb, banquma ukubekela eceleni exchange kusukela inqubo ukudala ama-akhawunti nge empela okwesikhashana. Ummeleli we ibhange wachaza ukuthi lokhu isilinganiso sathathwa ngokuqondene yokuthi “lokushintshisana ulithola amaphoyisa” esimweni okuphanga ngonyaka odlule.
Ukuhwebelana amancane naphakathi ukuthi ahlinzeke akhawunti yenkampani, kunokuba virtual, alawule ezinye izidingo. Ngokwe Yonhap ukushicilelwa, okwamanje, ukusetshenziswa akhawunti yenkampani ovunyelwe inqobo Ukuhwebelana engasekela ngokugcwele nezibopho zabo ukuvimbela zemali, kanye ukuqinisekisa umazisi amakhasimende. Ngaphezu kwalokho, bona ziyobhekana “amasheke obuphelele amabhange neziphathimandla zezimali.” Nokho, Ukuhwebelana eziningi ayitholanga isiqinisekiso akhawunti amasha watshela Yonhap izintatheli ukuthi babeyoqhubeka sokumisa ukuthengiselana uma isimo awushintshanga. Ngokwe-Korean Blockchain Association, mayelana 787,600 amakhasimende ukusebenzisa ukushintshisana okunje, amafa kabani njengamanje limbo.
Thumela Previous:Coinbase iqala ukuhlolwa lokugcina Segwit
Thumela Landelayo:Akubona bonke abavukuzi siyosinda bitcoin Izindleko nokwehlisa
May 11, 2018 ngesikhathi 6:41 AM